Cisco Antananarivo Renivohitra sy Toamasina I : handrarahana fanafody avokoa ny sekolim-panjakana | NewsMada
Cisco Antananarivo Renivohitra sy Toamasina I : handrarahana fanafody avokoa ny sekolim-panjakana
Tsy nisy ny fanamarihana ofisialy ny fisantarana ny taom-pianarana vaovao 2017-2018 noho ny zava-misy eto amintsika ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina pesta, araka ny toromarika avy any amin’ny tomponandraikitra. Nentanina hanadio ny atiny sy ny ivelan’ny sekolim-panjakana avokoa ny mpianatra sy ny mpanabe ary ny ray aman-dreny hialana amin’ny voalavo sy ny parasy. Tsy maintsy andrarahana fanafody ihany koa ny efitrano fianarana ato anatin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra ka nanombohana ny asa ny EPP Andraisoro, omaly hariva. « Miato mandritra ny hateloana ny fianarana satria tsy azo sokafana ny efitrano hampahomby ny fanafody mpamono bibikely, hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul », omaly teny Ambohimiandra. Enim-bolana ny faharetan’ny herin’ny fanafody araraka amin’ny efitrano fianarana.
Nidina teny amin’ny EPP sy CEG Ambohimiandra ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena niaraka tamin’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Ratsirarson Joséa, omaly maraina. Tanjona ny hiresaka amin’ny mpanabe sy ny mpianatra momba ny aretina pesta sy ny fisorohana tokony hatao tsy hahatonga ny aretina isan-tokantrano. Nohazavaina fa aretin’ny loto ny pesta ka tokony hitandro fahadiovana ny rehetra, manomboka any an-trano hatrany an-dakilasy.
Nikatona ny efitrano fianarana tany Toamasina
Handrarahana fanafody avokoa ny efitrano fianarana amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra sy any Toamasina I ary misy ny fandaminana efa voaomana mialoha hanaovana an’izay. “Ny sekoly tsy miankina kosa, tokony handray andraikitra amin’ny fandrarahana fanafody ny toeram-pianarany ny mpitantana rehetra”, hoy ny minisitry ny Fanabeazana.
Raha vao misy tranga mampiahiahy toy ny fanaviana, entina any amin’ny mpitsabo ny mpianatra fa tsy alefa any an-dakilasy intsony. Maimaimpoana avokoa ny fanafody enti-mitsabo ny pesta manerana ny tobim-pahasalamana miankina amin’ny fanjakana.
Nanambara koa ny minisitra fa hahemotra amin’ny fotoana hafa ny fivorian’ny “proviseur” ho an’ny lycée manerana Nosy saika hotontosaina eto Antananarivo, amin’ity herinandro ity